DEG DEG:Qaramada Midoobe oo ku dhawaaqday war ka farxiyey dalalka Islaamka ah & Donald Trump oo naxdin…… – Puntland News
Home 2017 December 22 Somali News, World News DEG DEG:Qaramada Midoobe oo ku dhawaaqday war ka farxiyey dalalka Islaamka ah & Donald Trump oo naxdin……
DEG DEG:Qaramada Midoobe oo ku dhawaaqday war ka farxiyey dalalka Islaamka ah & Donald Trump oo naxdin……
December 22, 2017 · by	Wararka · 0
Gollaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa goor dhoweyd si aqbaliyad ah ugu codeeyay Qaraar lagu diidan yahay go’aankii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump magaalada Qudus uu ugu aqoonsaday caasimadda Israa’iil.
Cod loo qaaday Qaraarka diidmada Trump ayay u codeeyeen 128 dal iyadoo ay ka aamuseen 35 dal, waxaana diiday 9 dal oo qura, waxaana arrintan oo guul siyaasadeed u ah Dalalka Muslimiinta iyo reer Falastiin ay sii go’doomineysaa Maraykanka.
Qaraarka gollaha guud ayaa go’aankii Trump ee ku saabsanaa magaalada Qudus ka dhigaya mid sharci darro iyo waxba kama jiraan ah oo ay qasab tahay in la baabi’iyo, inkastoo go’aanada gollaha guud aanay fulintooda qasab ahayn.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha Maraykanka uu ku hanjabay in dalalka taageera go’aankan uu ka jari doono taageerada dhaqaale ee Maraykanku siiyo dalalkaasi.
193-da dalka ee Q/Midoobay ayaa waxaa go’aankan taageeray 9 dal oo kaliya oo aanay ku jirin dalal qiimaha leh marka laga reebo Maraykanka iyo Israa’iil oo arrintan waday, waxaana dalalkaasi kala yihiin: US, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Palau, Micronesia, Marshall Islands iyo Nauru.
Filed in: Somali News, World News